आफ्ना शेयर सदस्यको निःशुल्क उपचार गर्दै सहारा
२१ असार, सुरुङ्गा, झापा । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोडले ४४५ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । आफ्ना शेयर सदस्यको निःशुल्क औषधिउपचार गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सहकारीले सञ्चालन गरेको जीवन बरदान कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुको निःशुल्क औषधि उपचार गरेको हो । सहकारीका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु ७२ […]
२१ असार, सुर्खेत । स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएपछि वरिष्ठ हाडजोर्नी चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भर्ना गरिएको छ । पाँच दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. केसीलाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल, जुम्लाको आकस्मिक कक्षमा बुधबार साँझ भर्ना गरिएको हो । स्वास्थ्य निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि एम्बुलेन्सबाट उहाँलाई अस्पतालमा पु¥याइएको प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर […]
२० असार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको मागसहित जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सांसदको समूह खटाउने निर्णय गरेको छ । डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गम्भीर बन्दै गएको उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रतिनिधिसभाका सांसदद्वय प्रकाश स्नेही र रंगमती शाही तथा प्रदेशसभाका सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने […]
२० असार, पर्वत । जिल्ला अस्पताल पर्वतमा रहेको शवगृह व्यवस्थित बन्न नसक्दा अस्पताल परिसर मात्रै होइन शवगृह आसपासका घरमा पनि कुहिएका शवको गन्धले बसी नसक्नुको दुर्गन्ध पैmलिने गरेको छ । पूर्वाधार बिनाको शवगृहमा शवलाई केही दिन सुरक्षित गरेर नबिग्रने र गन्ध नआउने किसिमले राख्न नसक्दा दुर्गन्धबाहेकका अरु समस्या पनि देखिएका छन् । गर्मी बढेसँगै जिल्ला […]
रक्तदाताको स्वास्थ्य जाँच नगरी रक्तदान
१९ असार, ललितपुर । ललित ब्यासले अहिलेसम्म ५९ पटक रक्तदान गर्नुभयो । उहाँबाट प्रेरित भएर उहाँकी छोरीले उमेर पुग्नासाथ (१८ वर्षदेखि) रक्तदान गर्न थाल्नुभयो । नेगेटिभ समूहको रगतको माग हुँदा उहाँले दिइरहनुभयो । रक्तअल्पता हुँदासमेत उहाँले रक्तदान गर्न नछाडेको बाबु ब्यास बताउनुहुन्छ । शरीरमा रगतको निकै कमी भएपछि मात्रै छोरीलाई रक्तअल्पता भएको आफूले पत्तो पाएको […]
दुईवटै मिर्गौलामा समस्या हुँदा सहयोगको याचना
१९ असार, काठमाडौँ । भूकम्पपीडित रमिता कार्कीका दुईवटै मिर्गाैला फेल भएर लामो समयदेखि अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहेपछि आश्रित परिवारले सहयोगको आग्रह गरेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ जिलु स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएकी कार्की विगत सात महिनादेखि काठमाडौँको जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहनुभएको छ । विसं २०७२ मा पटकपटक गएको भूकम्पबाट दोलखाकै सिंगटीलाई केन्द्र बनाएर […]
१८ असार, चितवन । भरतपुर अस्पतालले साँझ र बिहान पनि डाइलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिरामीले पालो नपाएपछि अस्पतालले साँझ र बिहानसमेत डाइलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । गत भदौ १२ गतेदेखि अस्पतालले दैनिक दुई चरणमा डाइलोसिस सेवा शुरु गरेको थियो । पालो नपाएर कुर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि साउनको पहिलो साताबाट सो […]
१८ असार, दार्चुला । दार्चुलाको जिल्ला अस्पताल दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । विगतमा जिल्ला अस्पताललाई केन्द्रबाट आउने बजेट यस वर्ष थोरै आउनु र यहाँका स्थानीय तहले आवश्यक बजेट नदिँदा जिल्ला अस्पताल बजेट अभावमा दयनीय बनेको हो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्र दयनीय अवस्थामा हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ । “ल्याबमा काम गर्दा प्रयोग गरिने सर्जिकल […]
गर्भ अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा मिल्छ ?
दिनभरको थकानपछि रातको समयमा राम्रो निन्द्रा निकै आवश्यक छ । तर धेरै थकानले पनि निद्रा खल्बलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राम्रोसँग निद्रा चाहिन्छ । निद्रा कसरी राम्रो बनाउने, थाहा पाउनुस् । तातोपानीले नुहाउँदा रक्तसन्चार सुरुमा केही बढी हुन्छ, तर पछि मन्द हुन्छ । तर चिसो पानीले नुहाउँदा रक्तसन्चार सुरुमा मन्द र पछि केही बढी हुन्छ […]